Botswana na-atụpụta ịmachibido ịchụ nta na azụmaahịa ka ọnụọgụ enyí na-ebelata
Home » Na-agbasa News Travel » Botswana na-atụpụta ịmachibido ịchụ nta na azụmaahịa ka ọnụọgụ enyí na-ebelata
Nsonaazụ nke enyí e mere na nso nso a na nke kachasị baa ụba na Botswana na-eme atụmatụ ọnụọgụgụ mba ahụ na enyí 126,000, na mbido ọzọ si na 131,600 a kọrọ na 2014. Akụkọ ahụ gosipụtara ihe akaebe ugboro ugboro nke mmụba dị ukwuu na ịchụ nta enyí na mpaghara anọ na Northern Botswana, nke malitere oké mmiri ozuzo na mgbasa ozi n'afọ gara aga.
Nkwupụta a sitere na Elephants na-enweghị ala (EWB) na-abịa mgbe kọmitii kọmitii kọmitii gosipụtara Onye isi ala Masisi nyocha ha ịchụ nta na Tọzdee izu gara aga, nke na-atụ aro ọ bụghị naanị ibuli mmachibido ịchụ nta, kamakwa iwebata anụ elephant na anụ enyí metụtara. ụlọ ọrụ canning maka nri anụ ụlọ, yana imechi ụfọdụ ụzọ mpụga anụ ọhịa.
Ndi ochichi Botswana buru ụzọ nyefee CITES nkwadebe maka nzukọ CoP18 na Mee nke afọ a, na-arịọ ka a gbanwee ndepụta CITES nke enyí savannah nke Africa iji nye ohere maka ịchụ nta trophies, anụmanụ ndị dị ndụ na aha ndị gọọmentị debara aha (nke gọọmentị) ọdụ.
Dabere na akụkọ Ọnọdụ Elephant nke Africa (2016), Botswana si onu ogugu jụrụ 15% na afọ 10 gara aga. Akụkọ a na-egosi n'ụzọ doro anya na ọnụ ọgụgụ enyí Botswana anaghị arị elu, dịka a na-atụkarị aro na paseeji ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ịchụ nta. Ọ bụ ezie na ndị bi na ya ka bụ ndị kasị ukwuu na Southern Africa, n'ezie 100, 000 na-erughị 237,000 mgbe kwuru site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi na Botswana. N’ịgbalị ịkọwapụta ịchụ nta na ịchụ nta.
Ọnụ ọgụgụ elephant EWB nke 126,000 dabere na nyocha mbara igwe dum, na-ekpuchi mpaghara buru ibu karịa ọmụmụ ọ bụla EWB gara aga. EWB na DWNP jikọtara na-agafe oge nke 62, na-edekọ ihe karịrị 32,000 kilomita nke transects ma na-ekpuchi 100,000 km2 nke Botswana, gụnyere Chobe, Makgadikgadi na Nxai Pan National Parks na gburugburu Wildlife Management Areas, Okavango Delta na Moremi Game Reserve, yana ebe ndị a na-azụ atụrụ na Ngamiland, Chobe na Central Distrikti.
A na-ekpughere ebe enwetara enyí anọ na Northern Botswana
Kemgbe nyocha ikpeazụ emere na 2014, ndị otu nyocha EWB chọpụtara nrịgo dị elu na ozu enyí ọhụrụ na nso nso a, yabụ enyí nwụrụ n'ime afọ gara aga nke ihe na-akpata ma ịchụ nta.
Ndi otu EWB kwenyere na n'ime ozu 128 na-erughi otu afọ, ekwuputara 72 ma obu n'ala ma obu site na nyocha nke ikuku dika ndi ojoo na-egbu ma gbakwunye 22 site na foto ndi nyocha dika ndi na-acho. Tụkwasị na nke ahụ, a tụlere afọ iri asaa na itoolu karịa otu afọ na otu ebe na-ekpo ọkụ, nke 79 kwadoro na ọ dị. Onu ogugu ndi mmadu gbara onu ogugu site na 63% rue 6.8% n'etiti 8.1 na 2014, anabatara ha dika ndi na-eme ka enyí nwere ike iju.
Enyi niile na-egosi ihe akaebe nke ịchụ nta na ụdị modus operandi. Ndị na-achụ nta na-eji égbè buru ibu agba ụmụ anụmanụ ahụ mgbe ha bịara ị drinkụ mmanya na pans nke oge dịpụrụ adịpụ. Ọ bụrụ na enyí ahụ anwụghị ozugbo, otu n'ime ndị na-achụ nta ahụ na-ebugharị ya site na iji anyụike mebie ọgidigi azụ. A na-apụnara ha ha, na-emebi okpokoro isi, na-ewepụkarị ogwe ahụ na ihu, a na-ekpuchikwa ozu ahụ na alaka ya iji zoo anụmanụ nwụrụ anwụ.
O yiri ka ndị na-achụ nta ahụ hà na-arụ ọrụ n'otu ebe, na-eji ehi ndị ahụ ebu nnukwu ibu ehi, tupu ha agaa ebe ọzọ. Ha adịghị ngwa ngwa, ebe a chọpụtakwara ogige onye na-azụ onye dị nso n'otu ụyọkọ ozu.
Otu nyochara ala ahụ kwubiri na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke enyí ọhịa bụ n'ezie ehi dị n'agbata afọ 35-45. Nke a kwekọrọ na ihe akaebe na akụkọ ahụ na ọnụ ọgụgụ ndị bekee belatara site na mmadụ 21,600 na 2014 ruo 19,400 na 2018.
Thechụ nta ahụ pụtara nke ọma na ebe anọ na-ekpo ọkụ na Northern Botswana - mpaghara dị n'etiti Pan Handle na Caprivi Strip, na na gburugburu ngalaba Savuti nke Chobe gụnyere Khwai na Linyanti, nke dị nso na Maun, na mpaghara dị n'etiti Chobe na Nxai Pan.
Otu ndị ọkà mmụta sayensị enyi anọ na-enweghị onwe ha tụlere akụkọ EWB ma chọpụta na sayensị bụ ihe siri ike. Otu onye otu kwuru, "nke a bụ akụkọ zuru oke nke ọma edepụtara nke ọma na-egosi oke ike".
Ka o sina dị, gọọmentị Botswana ka na-agbali itinye obi abụọ n'ọtụtụ okwu zuru ezu na akụkọ ahụ, dịka akụkụ nke mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbagha. EWB na-agbagha gọọmentị na-azọrọ ma kwuo na ha na-akwa ụta na gọọmentị akpọtụbeghị ha ozugbo iji kpaa mkpesa ahụ.
Na mgbakwunye na ọtụtụ ọnwụ enyí, ndị na-achụ nta gburu rhino 13 naanị n'ime ọnwa iri na otu na Botswana, atọ n'ime ha nọ na Okavango Delta. Ọganihu nke ịchụ nta anụ ọhịa dị egwu, mana ọ dị nwute na ọ bụghị naanị Botswana.
Dr Iain Douglas-Hamilton, onye otu ndị otu nyocha, na-ekwu "na anya m [EWB] gụrụ na-egosi na ịchụ enyí abawanyela na ọkwa karịa ka anyị siri chee na mbụ, na-ewelite ohere na ọ ga-ekwe omume ịgbalite ọzọ".
Onye otu ọzọ na-agbakwụnye, “ọ dị mma ịsị na, ọ bụrụ na usoro ịchụ nta a na-ahụ anya aga n'ihu, enwere ike ịbelata oke ọnụ ọgụgụ enyí. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anaghị enwe mmasị ịhụ mgbasa ozi na-adịghị mma n'agbanyeghị nke a kwesịrị ime dị ka oku ịdọ aka na ntị, ma kwesịrị igbochi usoro ".
Boeing họpụtara onye bụbu onye nnọchi anya US dị ka onye ntụzi
SKAL India weputara klọb nke abụọ na Mumbai
Ndị G20 Ndị njem na-ahụ maka njem nlegharị anya na-agba ume maka mgbanwe ndụ ndụ maka mgbake na-adigide
United Airlines na-enye ndi oru nlekọta ahụike otutu nde kilomita